Taratasy matihanina momba ny Transgenderism | HAMPITOERANA
Ny ray aman-dreny dia mifanakalo hevitra momba ireo filan-kevitra azo antoka momba ny fanambadiana
Horonantsary famoahana Transgender nataon'ireo izay niverina avy amin'ny nofinofin'ny Transgender
Lahatsoratra momba ny Transgenderism
Programa azo antoka
Zon'ny ray aman-dreny.
Taratasy momba ny Transgenderism.
Mpandray anjara: -
Ny mpampianatra atao hoe Dianna Kenny.
Dr. Paul McHugh.
Ny profesora John Whitehall.
Laboratoara Victorian mandràra ny fanoloana ny fanandramana ny lahy sy ny vavy amin'ny ankizy. - Prof John Whitehall
Ny governemantan'i Labour ao Victoria dia eo am-pamoronana ny lalàna handrara ny antsoina hoe 'fitsaboana fiovam-po' izay mamaritra azy ho 'fanao na fitsaboana izay mitady hanovana, hanelingelina na hanafoana ny fironana ara-pananahana na ny maha-izy azy'.
HAMAKY BEBE KOKOA ....
IS GENDER DYSPHORIA FIVORIANA SOSIALY - Prof Dianna Kenny
Na dia maloto fanahy aza ny manome tsiny ny trangan'ny fifandonana ara-tsosialy amin'ny vanim-potoana nomerika, izay anananan'ny olona, ​​na tanora na antitra, dia mifamatotra amin'ny fitaovan'ny haino aman-jery sosialy azy, mazoto mikaroka ny sarin'izy ireo ho an'ny vaovao farany, ny lamaody, ny toerana fialan-tsasatra, ny fety mankasitraka, na ny tranonkala mampiaraka mba hanamafisana ny “fomo” (izany hoe, tahotra ny tsy hananana), ny fifandonan'ny fiaraha-monina no nanambara mialoha ny fahatongavan'ilay cyber, ka napetrany tao an-tsainan'ny olombelona ny fiaviany, ka nanendrena ny haino aman-jery sosialy amin'ny andraikiny ho toy ny fitaovana mahomby amin'ny fifandirana. .
Olana lehibe amin'ny fanapahankevitra momba ny fitsaboana ny tetezamita: Fanontaniana & Valiny. - Prof Dianna Kenny
Ao amin'ity lahatsoratra ity aho dia miatrika olana lehibe amin'ny adihevitra transgender satria mahakasika ny ankizy sy ny tanora. Anisan'izany: «Milamina,« mahomby »sy mahaliana indrindra ny zaza ny fikarakarana ny fitovian-dehilahy? Rehefa mandinika ireo fanontaniana ireo aho dia mandinika ny fiantraikany ratsy momba ny famoretana amin'ny fahatanorana sy ny hormonina miady amin'ny firaisana ara-nofo, anisan'izany ny tsy fahampiana sy ny toe-pahasalamana hafa ary ny fitomboan'ny famonoan-tena tsy misy fitsaboana.
Ny fandraisan'anjara fanatanjahantena vehivavy sy ny fanamafisana ny lahy sy ny vavy: lalan'ny fifandonan'ny etika fitsaboana. - Prof Dianna Kenny
Tamin'ny taona 2009, nandresy i Caster Semenya, atleta afrikanina atsimo, tamin'ny sisiny 20 metatra avy amin'ny mpifaninana akaiky azy, ny hetsika vehivavy vehivavy 800m amin'ny fiadiana ny ho tompondaka ara-panatanjahantena. Fohy sisa ny fandreseny. Nipoitra ny fiampangana fa "tena lehilahy i Semenya." Ny 18 taona avy amina tanàna iray mahantra ao amin'ny reniranon'i Limpopo any Afrika Atsimo dia nanjary lohahevitra tsy voahevitra tamin'ny fikomiana media iraisam-pirenena izay nahitana ny famoahana ny antsipirihany momba ny fitsaboana tsy miankina.
Mpanome loharano Dysphoria ho an'ny mpanome: Dr. William Malone
Ara-pitsaboana, ny teny transgender / transsexual dia manondro olona iray izay nanao dingana lehibe hanehoany ny tenany amin'ny fiaraha-monina ho toy ny firaisana ara-nofo, amin'ny ezaka hanamaivana ny firaisana ara-pananahana henjana sy maharitra. Tsy misy olona teraka transgender na transsexual ary tsy misy mpahay siansa iray tena nanao an'io fitakiana io. Tsy azo atao ny teraka ao anaty vatana "ratsy" ("atidoha zazalahy" ao amin'ny vatan'ny tovovavy ohatra).
Firaisana ara-pananahana sy lahy sy vavy - Dr Paul McHugh
Fanamarihan'ny tonian-dahatsoratra: Ny fanontaniana mifandraika amin'ny firaisana ara-nofo sy ny lahy sy ny vavy dia manondro ny lafiny sasany akaiky indrindra sy manokana amin'ny fiainan'ny olombelona. Nandritra ny taona vitsivitsy dia nanakorontana ny politika amerikana koa ry zareo. Atolotray an'ity tatitra ity - nosoratan'i Dr. Lawrence S. Mayer, epidemiologist iray voaofana amin'ny aretin-tsaina, ary ny Dr. Paul R. McHugh, azo inoana fa ny mpitsabo aretin-tsaina amerikanina lehibe indrindra tamin'ny taonjato tapany.
Fianakaviana Voalohany - Nouvelle Zélande. Fampitandremana nataon'ny mpitsabo ny zaza ho any Nouvelle Zélande - Prof John Whitehall
Ny aretina iray antsoina hoe «dysphoria momba ny lahy sy ny vavy» dia manapotika ny tontolo tandrefana. Rehefa nipoaka avy tsy fahita firy latsaky ny folo taona lasa, misy fitomboana ankehitriny ny isan'ny zaza atolotra ho an'ny unit-tsangana manokana any amin'ny hopitaly lehibe an'ny ankizy miaraka amin'ny fitarainana 'teraka tao amin'ny vatana tsy izy'.
Mangataka ny fanadihadian'ny parlemantera momba ny famadihana ara-tsosialy sy ara-pitsaboana amin'ny ankizy miaraka amin'ny Gender Dysphoria - Prof John Whitehall
Manoratra aho hisaotra anao noho ny ahiahinao momba ny fitomboan'ireo ankizy Aostraliana marobe izay voalaza fa mijaly noho ny firaisan'ny lahy sy ny vavy ary milaza ny ahiahako amin'ny tsy fisian'ny fototry ny siansa ho an'ny fitsaboana ara-pitsaboana momba ny zaza nitaiza zazalahy kely.
Copyright 2018. FANAMPIANA (Fiaraha-miombon'antoka amin'ny fanabeazana ara-pananahana tsy ara-dalàna) Vondrona Advocacy voasoratra. Zo rehetra voatokana